Slackware 14.2 yave kuwanikwa, iyo vhezheni nyowani yeiyo 'slack' yakanyanya | Linux Vakapindwa muropa
Pakutanga mwedzi uno, ndiko kuti, mazuva mashoma apfuura, yazvino uye nyowani vhezheni yeSlackware yekuparadzira yakaburitswa: Slackware 14.2. Iyi vhezheni nyowani inounza kururamisa kwakawanda mabugs asi ichave inozivikanwa nekuisirwa yakagadziridzwa software yeakanyanya kunyorera kweGnu / Linux nyika, asi isina kunyatso kuvandudzwa.
Munyika yeKDE, mushandisi haazove nePlasma pane Slackware 14.2 icharamba iine KDE bazi 4. Ichi chitsva kubva mushanduro dzakapfuura, asi richiri bazi rekare kana tichienzanisa neshanduro dzazvino.
Zvisinei, Slackware 14.2 ine yazvino vhezheni yeXfce uye Linux kernel 4.4, zvinonakidza uye zvakakosha zvinhu zvinoita kuti Slackware 14.2 itange kucherechedza yakawanda michina iyo kusvika parizvino yaisina kuziva.
Slackware 14.2 ichave iine vhezheni yezvombo zveARM
Slackware 14.2 inoenderera nefilosofi yayo uye kwete chete inopa yakagadzikana mashandiro sisitimu asi zvakare inoenderera uchishandisa iyo LILO bootloader, imwe nzira yeGrub2 iyo yaive yakanganikwa kwenguva refu nevashandisi veGnu / Linux, kunyangwe sezvatinoona haina kuwira mukukanganwa zvakanyanya Kungoita nekuti rekare bootloader hazvireve kuti hazvienderane nemabasa emazuva ano. Mune ino kesi LILO inotsigira UEFI bios, iyo ichatibvumidza isu kushandisa Slackware pane 64-bit makomputa.
Pamusoro pemapuratifomu echinyakare, Slackware 14.2 zvakare ine vhezheni yeARM yatinogona kupfuura nayo Iyi link, saka nyangwe Raspberry Pi 3 vashandisi vachakwanisa kushandisa Slackware pamushini wako.
Slackware 14.2 ndiyo vhezheni nyowani yeimwe yeakagovaniswa ekare-kare aripo. Yayo uzivi haisi yekuita kuti zvinhu zvive nyore kune newbies asi kuve yetsika uye yakagadzikana system. Panguva idzi pfungwa itsva inoenderana uye zvinoita sekunge zvishoma nezvishoma zvishoma nezvishoma zvave kuve nyore kune wekutanga mushandisi. Mumazuva ese aya kudzoreredzwa kubva kuSlackware 14.1 kuchatanga, asi isu tinogona kuwana iyo yekumisikidza mufananidzo kubva Iyi link, chimwe chinhu chinokurumidza uye chinoshanda Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Slackware 14.2 yave kuwanikwa, iyo vhezheni nyowani yeanonyanya 'kusviba'
Franz: sei kuiisa pane yako kugovera